Axmed Madoobe iyo Yamamoto oo ka wada hadlay xaaladaha siyaasada iyo amniga Somalia… – Hagaag.com
Axmed Madoobe iyo Yamamoto oo ka wada hadlay xaaladaha siyaasada iyo amniga Somalia…
Posted on 23 Janaayo 2020 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Khamiis ah 23-Jannaayo magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kula kulmay Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya, Donald Yukio Yamamoto.
Sidoo kale kulanka ayaa looga wada hadley arrimaha amniga iyo baahida loo qabo in howlgal loo dhanyahay la qaado kaas oo ay ka qeyb qaadanayaan DFS, Dowlad goboleedyada, Amisom iyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya, howlgalkaas oo noqon kara xalka ugu dhow ee dalka nabadiidka looga sifeyn karo.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey ciidamada Maraykanka ee ku sugan magaalada Kismaayo kuwaas oo la howlgala ciidamada Jubbaland qeybahooda kala duwan ee sida joogtada ah ula dagaalama argagixisada ragaadisay dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa Dowlada Maraykanka ugu mahadceliyey Wakaalada Horumarinta ee Maraykanka (USAID) taas oo tiro mashaariic ah ka fulisay deegaanada inta xorta ah ee Jubbaland.
Ugu danbeyn Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya mudane Yamamoto ayaa madaxweynaha Jubbaland uga mahadceliyey sida hagar la’aanta ee uga qeyb qaatay nidaamka deyn cafinta Soomaaliya.